कोरोनाबाट बच्न लगाएको पन्जाले झन् संक्रमण फैलाउन सक्छ
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यकोरोनाबाट बच्न लगाएको पन्जाले झन् संक्रमण फैलाउन सक्छ
विराटनगर, २१ असोज । कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण आफूलाई सुरक्षित राख्न मानिसहरूले पन्जा लगाउन थालेका छन् ।
पसल, बजार र कार्यालयमा समेत कतिपयले पन्जा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, पन्जा संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि कुनै स्पष्ट समाधान नभएको र यसले कोरोनाको जोखिम कम नगर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पन्जाले भाइरसबाट नबचाउने तथा उल्टो संक्रमणको जोखिम बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार पन्जा लगाएर संक्रमित सतहहरू छुँदा त्यसमा भाइरस टाँसिने हुन्छ र अर्को सतहहरू छुँदा पन्जाबाटै भाइरसहरू अर्को सतहमा सर्न सक्छ । भाइरस भएको पन्जाबाट आफैंलाई पनि कोरोनाको जोखिम हुन सक्छ । भाइरस भएको पन्जाले अर्को व्यक्तिलाई छुँदा वा आफ्नै नाक, आँखा, मुख छुँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भाइरस सर्दै कोभिडको संक्रमण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
पन्जाले सुरक्षाको गलत अर्थ दिन्छ, जसले संक्रमण हुँदैन भन्ने मानसिकरुपमा भ्रम सिर्जना हुन्छ, जसकारण हातको सरसफाइमा कमी हुन गई संक्रमण फैलन झनै मद्दत हुन सक्छ । साथै, डा. अधिकारीले पन्जाको प्रयोग गर्दा अनावश्यक खर्चसमेत हुने बताएका छन् । एक पटक लगाएको पन्जा फेरि प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैन । पन्जा नलगाउँदा पनि संक्रमणको खतरा पन्जा लगाउँदाजत्तिकै हुन्छ ।